ब्राह्मणलाई दोष किन? -
ब्राह्मणलाई दोष किन?
June 3, 2020 June 3, 2020 khullapatiLeaveaComment on ब्राह्मणलाई दोष किन?
-डा. रुद्रनाथ अधिकारी
काठमाडौँ – समाज र देशमा जुनसुकै अपराध भए पनि ब्राह्मणलाई दोष किन ? मर्दा नि बाहुन, जन्मदा नि बाहुन, ब्रतबन्ध गर्दा नि बाहुन, बिहे गर्दा नि बाहुन, श्राद्द गर्दा नि बाहुन, ग्रहशान्तीमा नि बाहुन, शिलान्यासमा नि बाहुन, उद्घाटन समारोहमा नि बाहुन, एकाह, सप्ताह, रूद्री, आहुती, जे गर्दा पनि बाहुन चाहिने।
खुशी हुदा होस या दुख पर्दा जता नि बाहुन चाहिने । न आज सम्म बाहुन ले तेरो बाउ मर्दा कृया गर्न मलाई बोला है भनेर स्वयंको मार्केटिङ्ग र विज्ञापन गरेको छ, न कर्म गर्न आउनु अघि टीका लगाएर दक्षिणा कति दिन्छस ? गणेश, दियो, कलस, आसिदामा पैसो कति हाल्छस ? भनेर सोध्या छ ?
गुरू मेरोमा पुजा छ आईदिनु पर्यो भन्दै तिमीले नै बोलाई बोलाई ल्याउछौ। तिम्रो र तिम्रो परिवारको कल्याणको लागि ८, १० घन्टा पाठ पुजा गर्न लगाउँछौ र आफैँ नमागी पानी पनि सोध्दैनौ। प्रचण्ड गर्मीको महिनामा आगोको नजिक बसेर भोकै, प्यासै धुवाँ खाँदै आँखा बाट आँसु र नाकबाट सिंगान बगाउँदै यज्ञ, हवन गराउछन् र आफ्नो लागि केही माग र कामना नगरी ” मम यजमानस्य ऋद्धी, सिध्दी, समृद्धि, मंगल र कल्याण हेतु” भनी संकल्प गरेर तुच्छ खेतालाको काम पूरा गराउछौ ब्राह्मणलाई ।
अन्त्यमा उसको स्वास्थ र चाहना नसोधी चिल्लो चाप्लो भोजन गराइन्छ। पेट भर्नुको निर्विकल्प बाध्यतालाई स्विकारेर हिड्छन।अनि बाहुन गएसी त्यही बाहुनलाई शोषक, सामन्ती, लुटेरा, गरिब मारा भन्दै दिन रात गाली दिने? बाहुनसँग त्यत्ती नै रिस भए किन बाहुनलाई घरमा बोलाउछौ? सन्तान जन्मिए आफै गुगल खोलेर नाम राख,बाउ मर्दा आफै क्रीया गर पुजा आजा ब्रतबन्ध बिबाह सबै ताली पड्काएर गर।
१० घन्टा खाली पेटमा ग्यास्ट्रीकले चाउरी परेको शरिर लिएर दानमा पाएको जुत्ता र कपडा लगाएर तिम्रै निम्तो स्विकारेर तिम्रो घरमा आई तिमीले जति दिन्छौ त्यसैमा खुशी भई कर्म गर्नु छ।अझ त्यही बाहुनकै खैरो खन्छौ । तिमी काम गर्न जादा नि तलब सोध्छौ। मजदुरी गर्न जादा नि ज्याला सोध्छौ। अरु त छोड सेमिनार एटेन्ड गर्दा नि भत्ता खोज्छौ।
तर आजसम्म कुनै बाहुनले तिम्रोमा आउनु अघि तेरो बाउको श्राद्द गरेको २००० रुपैया हो दिने भए आउछु नत्र आउदिन भनेर भनेको छ ? तिम्रो घरमा एउटा धाराको टुटी फेर्न र एउटा बत्तिको चिम फेर्न आउने पलम्बर र इलेक्टृसिएनलाई १५ मिनेटको ५०० खुसी संग दिएर पठाउछौ। एउटा ब्याचुलर गरेको वोकिलले १५ मिनेट टाइ, सुट लगाएर वोकालत गर्दा २५,५० हजार फिस खुसी साथ दिएर बिदा गरिन्छ।
तर एउटा पण्डित, पुरोहितको न विद्वत्ताको ख्याल गरिन्छ मान्यता दिइन्छ न उमेर र क्षमताको मुल्यांकन गरिन्छ। बोलाउने तिमी, काम लगाउने तिमी अनि काम गरेर तिम्रो इच्छाले दिएको मजदुरी लिएर जादा उल्टो बाहुनले लुट्यो रे । के दिन्छौ तिमीले ?दियो कलस गणेसमा ५/१०को नोट हुन्छ ।
सिदाका टपरामा एक मुठी चामल र १/२ का ढ्याक हुन्छ। पुजा सक्किएसी दक्षिणा चै २००/५०० दिन्छौ । नत्र त ठुलो नोट त हुन्न नै । पुजा गराउदा भगवानसंग माग संसारमा भएका सबै सुख भोगका राख्छौ तर पूजामा चढाउने सामान किन्दा सबैभन्दा सस्तो,काम नलाग्ने लिन्छौ र चढाउँछौ।चामल पनि पुजा क्रममा चढाएको तिल, जौ, सर्स्यु, अक्षता, जल परेर आधिसरो बिग्रेको हुन्छ ।
काटेको स्याउका टुक्रा र केरा ५ घन्टामा कालो भई सकेको हुन्छ । जसको प्रयोग घरमा लगेर पसुको भाडामा हाल्न भन्दा अन्य कुनै प्रयोग हुदैन नै। पेटभरी खाना त हामी लेबर लाई नि दिन्छौं र तिम्रो घरमा नआउदा पनि सुख दुखले पेट त भरेकै हुन्छं, त्यसको के कुरा गर्नु । तर पनि त्यहिपनी बाहुनले लुट्यो भनिरहन्छौ।तिमीले स्वेच्छाले जे दिन्छौ त्यही न हो लैजाने।
फेरी लुट्यो भन्दै रूवाबासी के को ? ब्राह्मण कुलमा जन्मेकै आधारमा भन्न खोजेका हौ भने नाम तोकेर बाबुराम, प्रचण्ड, के.पी. ओली, माधव नेपाललाई भन। आपत्ती छैन।
एउटा पण्डित, पुरोहितले न दलित हत्या गर्यो, न घुस खायो, न भ्रष्टाचार गर्यो न देश र जनतालाई धोका दियो, न समाजमा झण्डा बोकेर हिड्यो। तिमी यो कर्म गराउन पर्यो भनेर आफैं भन्न आउछौ।आउँदिन भने किन आउँदैनस् , ठूलो भईस् भन्छौ र नाना गाली गर्छौं। गए ठग्यो, लुट्यो भन्छौ। एक पटक छात्तीमा हात राखेर सोचत त्यो ब्राह्मणको योग्यता खोज्छौ भने सास्त्री, आचार्य (bachelor/master degree) भन्दा कम छैन।
उसको लगानी, त्याग र योगदानको कति कदर गर्यौ। के बाहुन भएर जन्मिनु अपराध हो वा पेसा अभिसाप ? तिम्रो दुश्मनी के मा ? हैन भने सामजमा यो भ्रम र घृणा फैलाएर किन आतंक मच्चाउन चाहन्छौ र नौटंकी गरेर बीस बमन गर्दैछौ ? मेरो प्रश्नको सकारात्मक जवाफ पक्कै आउदैन। तर मनन अवश्य गरियोस मानिस भएर।
(उल्लेखित विचार लेखकका निजी विचार हुन् । यसले संस्थाको धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)
बाबुराम भट्टराईको कुकुरले छिमेकीको घरको कुकुर भेटेपछि………
यस्तो छ नेपाल अन्तरास्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघको बिकास क्रम
May 22, 2020 May 22, 2020 khullapati
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको महत्व, पूजा र व्रतविधि
August 11, 2020 August 11, 2020 khullapati
May 16, 2020 May 16, 2020 khullapati
टेलिभिजनबाट पढाइ : यस्तो छ प्याब्सनको व्यवस्था 28 views
प्याब्सनको टेलिभिजन सिकाइ : यस्तो छ समय र तालिका 27 views
विद्यालय खुलाउने तयारीमा सरकार, सञ्चालन कार्यविधि निर्माण 19 views
निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलद्धारा आत्महत्या 16 views
आइपिएल : चेन्नईलाई हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा उक्लियो 16 views
विद्यार्थीका लागि सिकाई चौतारी अनलाइन सुरु 16 views
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक, सवारी साधनले बढी भाडा लिन नपाउने 16 views
कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्च अबदेखि आफैँ व्यहोर्नुपर्ने 16 views
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्वबैंकको दियो १ करोड ८५ लाख अमेरीकी डलर अनुदान 16 views
आज हरितालिका तीज 15 views
कोरोनाको उपचार गर्न नसक्नेको राज्यले गर्छ (प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठसहित) October 23, 2020
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै दशैं मनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको अपिल October 23, 2020
थप ४,४९९ जनामा कोरोना संक्रमण, १७ जनाको मृत्यु October 23, 2020
आईपिएल : सनराइजर्सबाट राजस्थान रोयल्स पराजित October 23, 2020
आज बडादशैँको सातौँ दिन, घर घरमा फुलपाटी भित्र्याईँदै, सेनाले टुँडिखेलमा बढाईँ गर्ने October 23, 2020